🥇 ▷ Xiaomi Mi MIX 4 waxaa laga xaqiijiyay Shiinaha ✅
Xiaomi Mi MIX 4 waxaa laga xaqiijiyay Shiinaha
Ilaa iyo hadda wararka ku saabsan oo dhan Mi MIX 4 Waxay ka yimaadeen wararka xanta ah ee shabaqa laga helo. Sida muuqata, si kastaba ha noqotee, waxbaa runtii dhaqaaqaya iyo guushii calanka cusub ee Xiaomi way ka dhowdahay sidii ay umuuqato. Runtii taleefanka casriga ah ee qarsoon Xiaomi leh Isku xirnaanta 5G helay caddeyn machadka Shiinaha CNCA (Maamulka Shahaadada Qaranka iyo Maamulka Aqoonsiga). Faahfaahin aad u yar ayaa siibtay, laakiin waxaas oo dhami waxay muujinayaan inay runtii ku saabsan tahay Xiaomi Mi MIX 4.
Sidoo kale aqri: Xiaomi Mi MIX 4 ayaa diyaar u ah inay fuliso lacag ku-dallacsiinta wireless-ka ah
XIOAMI MI MIX 4 Waxay Heshaa NASIIQOOYINKA CNCA, QARAX KU SAABSAN XIRFADAHA SOCDAALKA 5G
Xiaomi Mi MIX 4 waxay ku heshay shahaado Shiinaha | Evosmart.it
Aaladda guud ahaan waxaa loo yaqaan “5G Taleefoonka Dijitaalka ah ee Dijitaalka ahOo wuxuu sitaa magaca lambar M1908F1XE. Sidii horeyba loo filaayey, faahfaahinta yar ee daadinta ayaa mid mid u horseedaya inuu ka fikiro Mi MIX 4. Waxa intaa u dheer in hore loo xaqiijiyay Isku xirnaanta 5G (oo horayba ugu jiray nooc ka mid ah Mi MIX 3 ee hadda jira) ayaa sidoo kale la cayimay Teknolojiyada lacag bixinta ee la taageeray ka casriga ah.
Sida ku xusan dukumiintiyada CNCA run ahaantii taleefankan casriga ahi wuxuu taageeri lahaa dib u buuxinta 45W. Runtii waa tallaabo muhiim ah oo horay loo qaaday marka la barbar dhigo 27W ogol yahay Deg deg ah 4+ ee Qualcomm waxaa taageeray Xiaomi Mi 9. Waxaan sidoo kale xasuustaa taas oo ah sida ay sheegayeen xanta Mi MIX 4 waxay awood u yeelan doontaa inay sidoo kale fuliso beddelida ku dallacsiinta wireless-ka, sida dukaannada calanka ee dhowaan la sameeyay ay horeyba u sameeyaan Huawei waa Samsung.
Xiaomi Mi MIX 4 waa inuu lahaadaa midka ugu dambeeya ee saaran Snapdragon 855, coaudiovato ka X50 modem taageero loogu talagalay Shabakadaha 5G. Filo a akhristaha sawirka faraha ka hooseeya shaashadda iyo RAM diyaarka u ah guddiga waa inuu ahaadaa 6 GB kala duwanaanta aasaasiga ah, laakiin mid ayaa sidoo kale joogi kara kala duwanaansho leh 12 GB oo RAM ah. Qiimaha la filayo nasiibdarro kuma jiri doono, laga yaabee inay sidoo kale sabab u tahay taageerada teknolojiyada 5G, waxaa la filayaa runtii a Qiimaha qiyaastii waa 750 Yuuro.
shahaadada waxaan ku daraa 4mi mix 4mi mix 4 5gicarica deg deg ah xiaomi